Kadhannaa Torbii (subaa’ee) Raajotaa
Waaqayyo jecha waadaa Addaamiif gale bu’uura taasifachuun dura bara Raajonni ka’an, itti aansuunis waa’ee nama ta’uu Iyyasuus Kiristoos, lammata deebi’ee dhufuu Isaas raajii dubbataniiru. Kadhannaa torbii lakkaawwataniiru. Isa 7:14, Faar 49:3, Zak 13:6, 14:1. Haalli dubbii raajummaa fi Kadhannaan torbee murtaawaa raaj-himeessa isa tokkoo kan raaj-himeessa isa biraa irraa addaa dha. Sababni isaas, Waaqayyo raajicha yommuu dubbisuu fi fakkeenyummaa isaas yommuu fakkeessu daandii isaa haala adda addaatiin ta’uu isaatiinii dha. “Durii jalqabee Waaqayyo akkaataa baay’ee fi daandii hedduun abbootota keenya raajotaan dubbateera” akkuma jedhu. (Ibr 1:1). Akkaataa lakkaawwii isaanii fi daandiin Kadhannaa torbii isaanii adda adda ta’us, kaayyoo fi galmi isaanii garuu tokkoo dha.
Kadhannaa Torbii (subaa’ee) Addaam
Addaam raajii dubbachuudhaanii fi kadhannaa torbee murtaawaa galuudhaan bakka jalqabaa qabata. Sababni isaas, Gannata keessatti, waggoota toorbaa fi ji’a tokkoo fi guyyaa kudha toorba badhaadhummaa fi gammachuudhaan erga jiraateen booda seera fi jecha Uumaa isaa cabsuu isaatiin gadda hiyyummaa tokko malee kan itti jiraatu Eedan Gannat keessaa arii’atameera. Uum 3:24. Innis Uumaan isaa akka itti araaramuuf, ija dhiifama Isaatiinis akka isa mil’atuuf, galaana qorri isaa dhaqna namaa kukkutu keessa dhaabbachuudhaan guyyoota soddomii shaniif Kadhannaa torbii shan galeera. Waaqayyo arjaan amalummaa Isaatiin gidirfamuu namaa hin jaalanne, guutummaadhaan gaabbuu Addaam ilaalee, “Guyyaa shanii fi walakkaatti dhala dhala keerraa dhaladheen sin fayyisa” jedhee abdii Isaa kenneef. Addaamis abdii kennameef qabatee biyya fooniitti waggaa dhibba sagalii fi soddomaaf erga jiraateen booda addunyaa rakkoo fi gidiraan itti baay’atu kana keessaa du’aan adda baheera.
Read more: Kutaa 2ffaa Kadhannaa Torbii (subaa’ee) Raajotaa
Barruulee Hamar, Adoolessa/Hagayya 1997 irraa kan hiikame
Baay’atus xiqqaatus, amantoonni baay’een keessa keenya kan ittiin ilaallu, arjummaa Waaqayyoos kan ittiin gaafannu yeroo kadhannaa torbii (subaa’ee) ni qabanna. Sababa yeroo dhabuunis ta’e ciminni dhabamuun hojii gaarii hojjechuuf kan hin dandeenye jiraannus, waa’ee kadhannaa torbii (subaa’ee) kan yaannu baay’ee keenyaadha. Kana ta’uu isaatiinis abbootni baay’een waan ittiin bu’aa buufataniif, kadhannaan torbii eessaa akka dhufee fi faayidaan isaa akkasumas, naannoo kana irratti qabxiilee wal qabatoo beekuu qabaannu irratti barumsa bal’aa osoo nuuf kennitani gaariidha.
Fiqirta Sillaasee Finfinnee irraa
Yeroo mara dubbistoonni baay’een naannoo mata duree kanaa irratti qophiiwwan keenya akka dhiyeessinuuf xalayaadhaan nu gaafattaniittu. Kanuma bu’uureffachuun waqtii isaa ilaalcha keessa galchuun barreeffama kana keessatti ni dhiyeessina. Deebii isaas qindeessee kan nuuf dhiyeesse B/saa H/Maariyaam Laaqawu dha.
Read more: Kadhannaa Torbii (Subaa’ee), Maalummaa fi Sirna Isaa